A Onwe Onye na Obi-Ekele Gị | Martech Zone
Otu Onwe na Obi Mkele diri Gị
Nke a bụ oge dị egwu maka ọrụ m n'ịntanetị. Taa, e kwuru banyere blog m na abụọ John Chow na Seth Godin si blọọgụ. Anọkwa m nso nso a na isiokwu nke ntinye ederede ntanye na ntanetị nke Pat Coyle! Izu gara aga, Mike na Ntọala dị amara iji kpọọ m "Z-lister". Nkwalite ọ na-enweghị ọdịmma onwe ya nke m mere ka m dee blog na ndị ọzọ 70, gụnyere ịkpọtụrụ taa na blọgụ Seth Godin.
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, blọọgụ m abanyela okporo ụzọ na ikike.
Ihe uto a esiteghị na nka m. O sitere na ochichom maka inweta na igbasa ozi na gị nkekọrịta nke gị ihe omuma na nka. M ga-ahụ ohere iji kelee onye ọ bụla n'ime gị. N'ezie, ọ bụrụ na m na-eme njem ọ bụla n'afọ na-eso ya na ọrụ, otu ebumnuche m bụ ime nke ahụ. Aga m eme ka ị mara ebe m na-aga, anyị ga-ezukọ maka ị drinkụ ma ọ bụ kọfị. Ọ bụrụ na ị na-abịa Indy, biko egbula oge ime ka m mara.
Oge ụfọdụ blọọgụ na-eri oge dị ukwuu nke ụbọchị m, mana ihe niile mụ na gị na-eme na-egosi na anyị na-arụ ọrụ:
Ana m anwa ịnye isiokwu mbụ na ọtụtụ ntinye m. N'ụzọ ahụ, blọọgụ m abụghị akụkụ nke mkparịta ụka ma ọ bụ na-ekwughachi akụkọ ahụ, ọ bụ ihe mkparịta ụka ahụ. Nke ahụ bụ ọrụ siri ike, mana ọ na-akwụ ụgwọ.
Oge obula m huru na edere m blog na saiti ozo ma obu blog, m na acho iza ma kelee onye ahu - oburu na post ha adighi nma (okachasi na obughi). Uru dị na mkparịta ụka ahụ. Adịghị m mgbe niile (ọ dị mma, adịkarịghị) ziri ezi, agbanyeghị.
M na-esonye na mmemme ịde blọgụ nke otu. Ọ bụrụ Problogger abụghị akụkụ nke usoro ịde blọgụ gị kwa ụbọchị, mee ya. Darren na-agbagha blogosphere na ọrụ otu. Ha niile nwere ọtụtụ nlebara anya na ikpughe.
Ana m akọrọ ihe m mụtara.
Ana m agbalị inyere onye ọ bụla jụrụ m ajụjụ aka. Ọ na-adaba m n’ime nsogbu ọtụtụ oge, mana ọ bụ ihe m ga-enye. Ọ bụ ‘onyinye m’, ọ bụrụ na ị ga-achọ.
Ana m ejikọ isiokwu na ndị ọzọ na-ede blọgụ. Ọ bụrụ na m hụ isiokwu nke mkparịta ụka ebe otu n'ime ndị na-ede blọgụ m gụrụ bụ ọkachamara, ana m agbalị mgbe niile ijikọ abụọ. Kedu ihe ntanetị maka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike inye aka mee njikọ ahụ?
Continue gaa n'ihu na-akwalite blog m.
Na-ekwu maka Ekele…
Anọ m ọdụ na Starbuck ugbu a. Ikwu eziokwu, a di m ala taa na mu anoghi na umu m na abalia ma obu echi. Ha na nne ha na nne na nna ha na-a Christmasụ ezigbo Christmas. Ka m na-ede, enwetara m emelitere site n'aka enyi m, Glenn, bụ onye nọ na ozi na Mozambique ma mee ka m nwee mmetụta dị mma nke ukwuu nke na m ga-enwe ekele maka ya.
O chetaara m na ndị ọzọ na-achụ ihe dị ukwuu n’oge ezumike a. Anaghị m achụ àjà ihe ọ bụla… mụ na Peppermint Mocha m nọ na ụlọ kọfị mara mma. Na Ndị Berry kpọọrọ ezinụlọ ha dum gaa njem na Mozambique iji nye aka ịkụzi na ịgbasa okwu ọma ahụ. You nwere ike iche? Enwere m nkwanye ùgwù dị egwu maka ndị na-enye nnukwu onyinye.
M chetakwara ndị agha anyị. Anọ m mba ofesi maka ọnwa 9 n’oge Desert Shield / Desert Storm wee nọrọ Christmas na-ese n’elu mmiri na Persia Gulf. Ọ na-agwụ ike ịhapụ n'oge oge na-eme ka ezinụlọ dị n'otu. Chineke na-agọzi ndị agha anyị, ndị ezinụlọ ha, na ezinụlọ ndị ahụ furu efu nke ukwuu.
Ekele diri unu niile! I meela nke a ezumike pụrụ iche nye m.
Ndi Ebe Gị, Blog, ma ọ bụ Nri Geotagged?
Bachelor nri abalị Christmas
Dee 25, 2006 na 12: 08 AM
Ekele maka ịrụsi ọrụ ike niile na-akwụ ụgwọ. Enwere m obi ụtọ ịgụ blọọgụ gị, ọbụlagodi na anaghị m aza ajụjụ kwa izu. Obi ụtọ na ezumike ma nọgide na-arụsi ọrụ ike.